Phinda kusukela Tatar-Mongol ijoka Russia kwashesha. Isifiso uthole ukufinyelela kolwandle kuye kwaholela ingxabano lokuqala ahlomile phakathi Russia nase-Sweden, eyathatha iminyaka emibili (1656-1658 GG.). Amabutho we Tsar Russian lwangena lwagxila aseBaltic, wathatha Nut, Kantsy wavimbezela Riga. Kodwa lo mkhankaso ukuhluleka, amabutho Swedish ngokushesha waphindisela.
Ukuvinjezelwa Riga ngenxa yokuntuleka ukwesekwa zasolwandle kanye nokudidiyela kwenziwa inefficiently. Ngenxa yalokho, inkosi u-Alexei Mikhailovich, wenza kuthula Sweden, lonke izwe wathumba ngaphansi kwazo ngesikhathi somkhankaso bathuthela eRussia. Ngemva kweminyaka emithathu, kakade Kardissky ngokuvumelana idokhumenti, laseRussia belilokhu baphoqeleka ukuba bayishiye inzuzo yabo.
Peter mina kwekuhlela kabusha yafuna izindlela ezintsha ulwandle. Arkhangelsk port wayengasakwazi ukuhlangabezana nezidingo wonke umbuso omkhulu. Ukudala Northern Union sehle kakhulu kwaqinisa isikhundla yeRussia. impi Russian-Swedish kwaqala ngo 1700. Ukuhlelwa kabusha yempi, imbangela okuyinto kwaba ukunqotshwa wokuqala at Narva, umzalele izithelo. Ngu 1704 amabutho Russian igxilile nasogwini eGulf of Finland wayethathile inqaba Narva futhi Dorpat. A-dolobha entsha yoMbuso wase-Russian yasungulwa ngo 1703 - Petersburg.
imizamo Swedish ukuze uthole kabusha phansi elahlekile kuholele izimpi ezimbili ngendlela ephawulekayo. Eyokuqala iphutha edolobhaneni Ihlathi, lapho isidumbu Levengaupt kwasani ukunqotshwa sabangelwa. amabutho Russian ashaqe kulandelana lonke ibutho isiSwidi wathatha ezingaphezu kwenkulungwane iziboshwa. Le mpi kwakwenzeka ngasemzini Poltava, amabutho Charles XII owathula AbAhl, futhi le nkosi ibalekela Turkey.
Eyesibili impi Russian-Swedish kwaba impi ekhazimulayo hhayi kuphela ezweni kodwa futhi olwandle. Ngakho, aseBaltic imikhumbi inqobe ngo-Gangut ngo-1714 futhi Grengam e ngo-1720 I iSivumelwano Nystad, kwaphela 1721, kuphelile empini Russian-Swedish iminyaka engu-20. Ngokusho isivumelwano, uMbuso Russian kwadingeka naseBaltics futhi ingxenye ningizimu-ntshonalanga yeNhlonhlo Yase-Karelian.
impi Russian-IsiSwidi of 1741 yagqashuka ngenxa izifiso okwandisiwe izigqoko iqembu elibusayo, obiza ukubuyiselwa amandla wangaphambili yezwe. Russia Bekulindeleke ukuba abuyele ezweni elahlekile ngokuhamba iMpi Northern. izenzo Akuphumelelanga imikhumbi abaseSweden kwaholela nokuqubuka omkhulu emikhunjini. Phakathi nempi yokulwa nezifo lemikhumbi yempi sabulala abantu abangaba 7500.
morale okuphansi emabuthweni ahlomile kuye kwaholela yokubuyiswa amabutho IsiSwidi in Helsingfors. ibutho Russian athumba Åland Islands, okuyinto entwasahlobo ka-1743 base kwawona. Ukuba manqikanqika Admiral Golovin kwaholela yokuthi lasolwandle Swedish wakwazi ukuphinde ahambe kude kokulwa ne isigaba Russian. Isimo esibi ibutho isiSwidi okwaholela kube isiphelo sesimiso ukuthula emzini Turku. Ngokusho lesi sivumelwano siyalandelwa, Sweden yanika umngcele inqaba kanye pool Kymen emfuleni. impi budedengu yokumlandela 40,000 izimpilo kwezigidi ezinhlanu kuya kwezingu-11 thalers segolide zemali.
Isizathu esikhulu ngxabano ubelokhu ekhonza njengomdala esidayisa lapho waya olwandle. Russian-Swedish War of 1700-1721 wabonisa izwe ngamandla izikhali isiRashiya, kwenza kwaba lula ukuqala ukudayisa namanye amandla Western. Ukufinyelela kolwandle waphenduka Russia ku umbuso. Russian-Swedish War of 1741-1743, kuphela baqinisekisa ukuphakama ezweni lethu phezu emazweni athuthukile-European.
Abandoned izindawo ezempi. Ingobo yomlando lezinto zilahlwe endaweni ayeyingxenye ye-USSR
UNikolai Rubtsov, "Kusihlwa": ukuhlaziya senkondlo. Iphupho imvuselelo